दुप्चेश्वर महादेवले हामी सबैको रक्षा गरुन्, यो साता तपाईको समय कस्तो छ ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/दुप्चेश्वर महादेवले हामी सबैको रक्षा गरुन्, यो साता तपाईको समय कस्तो छ ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
दुप्चेश्वर महादेवले हामी सबैको रक्षा गरुन्, यो साता तपाईको समय कस्तो छ ? हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
मिनः– समय अनुकुल बन्नेछ । अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ । भोज भतेर सभा सम्मेलनमा भाग लिने अवसर मिल्नेछ । समयमा परिश्रमपूर्व गरेका काम सफल हुनेछन् । दामपत्य जीवन सुख मिल्नेछ । सामाजिक उचाई बढ्नेछ । पराक्रम घट्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक होला । पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ
बुधबार गणेश भगवानलाई सिन्दुर चढाउँदा मिल्छ यस्तो लाभ